ကန့်ချုပ်ပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကန့်ချုပ် (Lead wart) သည် ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ရုက္ခဗေဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် မျိုးရင်းမှာ Plumbaginaceae ဖြစ်သည်။ ၎င်သည် "ကန့်ချုပ်ဖြူ၊ ကန့်ချုပ်နီ၊ ကန့်ချုပ်မင်း၊ ကန့်ချုပ်ပြာ၊ ကန့်ချုပ်နက် ဟူ၍ အချုပ်အားဖြင့် ၅မျိုးရှိသည်။ ကန့်ချုပ်ဖြူမှာ အပွင့်ဖြူ၍ ကန့်ချုပ်နီမှာ အပွင့်နီသည်။ ကန့်ချုပ်မင်းမှာ ပွင့်၊ရွက်၊ပင် သုံးမျိုးလုံးနီသည်။ ကန့်ချုပ်ပြာမှာ ကြယ်ပြာပန်း အရောင်ကဲ့သို့ ပြာနေ၏။ အပွင့်မှာ ကန့်ချုပ်ပွင့်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ကန့်ချုပ်ညိုဟုလည်း ခေါ်သည်။ ကန့်ချုပ်နက် မှာကား အလွန်ရှားပါသည်။ အဂ္ဂိရတ် ဆရာတို့သည် ကန့်ချုပ်နက်ကို သိုက်ဝင်သစ်ပင်မျိုးဟု ခေါ်‌ေဝါ်ကြသည်။ ၎င်း၏ သတ္တိကို ကြံစည်တွေးတောရန် ခဲယဉ်းသော အစိန္တေယျထိုက်သည့် အပင်မျိုးဟု နိဃဏ္ဍုဆရာတို့ မိန့်ဆိုကြ၏။ ကန့်ချုပ်ဖြူပင်ကို အဆိပ်မျိုးပင် ဟူ၍ ဖော်ပြကြသည်။ အမြစ်ကိုသာ အသုံးပြုရသည်ဟူ၏။
အရသာမှာ အဖြူသည် စပ်ရှားရှားရှိ၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ချုပ်၏။ ချောက်ထပ်စေ၏။ အဖြူသည် ရောင်ရမ်းခြင်း အနာ၊ အနာကြီး၊ ချောင်းဆိုး၊ ပိုးနာ၊ ယားနာ၊ အသည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုနာ၊ ရင်နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အနီသည် ကိုယ်ကိုဝဖြိုးစေသည်၊ နှုတ်မြိန်စေသည်၊ အနာကြီး‌ရောဂါကို ပျောက်စေသည်။ အနက်သည် လူ၏ဆံပင်ကို နက်စေသည်။ နွားနို့ဖြူထဲသို့ ထည့်လျှင် နွားနို့ နက်သွားစေလိမ့်မည်၊ နို့စားနွားမများ၎င်းအနံ့ကို ရှူမိလျှင် နက်သော နို့ရည်များ ထွက်လာစေတတ်သည် ဟူ၏။
↑ Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III" (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x.
↑ အရှင်နာဂသိန် ပုံပြဆေးအဘိဓာန်(ပထမတွဲ)(စာ-၅၈)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကန့်ချုပ်ပင်&oldid=717076" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။